Anontanio ireo Misiônera! Afaka Manampy Anao Izy Ireo! - Russell M. Nelson
Nataon’ ny Loholona Russell M. Nelson
Ao amin’ ny Kôlejin’ ny Apôstôly Roambinifolo
Ireo misiônera rehetra, na antitra na tanora, dia manompo miaraka amin’ ny fanantenana iray ihany, dia ny hanaovana izay hahatsara kokoa ny fiainan’ olon-kafa.
Ry rahalahiko sy anabaviko ary namako malala, manolotra ny fitiavanay sy ny fiarahabana anareo tsirairay izahay. Tena faly izahay tamin’ ny fanambarana nataon’ ny Filoha Thomas S. Monson tamin’ ity maraina ity, izay manitsy ny taona farafahakeliny hanaovana asa fitoriana ho 18 taona ho an’ ny zatovolahy ary ho 19 taona ho an’ ny zatovovavy. Maro kokoa amin’ ireo tanorantsika no ho afaka hankafy ny fitahiana avy amin’ ny misiôna noho izany fanitsiana izany.
Nanambara ny Filoha Monson roa taona lasa izay ary nantitranterina indray tamin’ ity maraina ity “fa ny zatovolahy rehetra izay mendrika sy afaka dia tokony hiomana amin’ ny asa fitoriana ny filazantsara. Andraikitra ao amin’ ny fisoronana ny asa fitoriana ny filazantsara—andraikitra izay antenain’ ny Tompo fa ho ataontsika, isika izay efa nomena be tokoa.”1 Nazavainy indray fa safidy izay raisina an-tanan-droa ny misiôna, ho an’ ireo rahavavy tanora, fa tsy adidy. Ary mbola nanasa mpivady maro kokoa izy mba hanompo koa.
Zava-dehibe ny fiomanana hanao asa fitoriana. Ny asa fitoriana filazantsara dia asa atao an-tsitrapo hanompoana an’ Andriamanitra sy ny zanak’ olombelona. Amin’ ny alalan’ ny vola natokan’ ireo misiônera manokana no hanohanan’ izy ireo an’ io tombontsoa manokana io. Afaka manampy ihany koa ireo ray aman-dreny, sy ireo fianakaviana, sy ireo namana ary ireo izay manolotra fanomezana ho ao amin’ ny Kitapom-bola Foibe ho an’ ny Asa Fitoriana. Ireo misiônera rehetra, na antitra na tanora, dia manompo miaraka amin’ ny fanantenana iray ihany, dia ny hanaovana izay hahatsara kokoa ny fiainan’ olon-kafa iz